Waa Cusub Kubada Cagta Dalka Djibouti
HomeWararka MaantaWaa Cusub Kubada Cagta Dalka Djibouti
Taariikhda waxa marki ugu horeysay gashay horyaalka kubada cagta dalka Jabuuti iyado xidhidhka kubada cagta dalkas ay bilaabeen qbashada kulamada rasmiga ah ee kamidka ah horyaalka dalkas garoomada ciyaaraha kubada cagta ka baxsan cassimada iyado magalada Cali Sabiih ee gobolka Cali Sabiih, waxana lagu qabtay kulankii 35ad ee tartanka koobka suber cupka dalka Jabuuti.
Kooxda hadda ah naadiga koobka horyaalka haysata horyaalka kubada cagta horyaalka dalka Jabuuti ee Jabuuti Telecom islamarkana ka dhisan gobolka Cali Sabiih ayaa soo dhowayse kooxda Dihkil FC xifiltaan ka dhaxayso ayaa kulankoodi ka dhacay garoonka cusub laga dhisay gobolka, waxana natijaada ciyaartu ku dhaamatay 6 – 2 oo ay guushu raacday naadiga Jabuuti telecom islamarkana ahayd guushi ugu waynayd ee sanadkan ku gulaystan. Waxana sido kale ka soo qayb galay kulankan masuuliyin ka socday xidhidhka kubada cagta dalka Jabuuti iyo xukumadda Jabuuti ayaa ka mid ahaa kumananka kun ee dawadayaasha dawanaye ciyaarta suber cupka dalka Jabuuti islamarkana lagu daah fureye garoonka casriga ah ee lo magaac bixiye Cali Sabiih sports Complex, waxana sido kale uu garoonkan u noqoneya garoonki ugu horeyee laga dhiso meel ka baxsan magalada Jabuti.
Ciyaartoyga xulka qaranka Djibouti
Gudomiyaha xidhidhka kubada cagta dalka Jabuuti, Saleeban Xasan Waberi ayaa sheegay in kubada cagta dalka Jabuuti ayaa ka soo gudbay wakhtiyadi hore islamarkana usoo gudbay waa cusub oo horumaarsan sidi shacabka dalkani ciyaarahu dalka oo dhan lagu qabto, waxana hadalkisu u dhigna sidan
“Waxa mudo dheer la sugayay oo manta ay tagaan tahay, dalka Jabuuti oo ah dal qaanqadh ah ku filan. Lakinse, waxa aan idin sheegaya in aynu gadhnay ujeedadaya diirada aynu saarayne, sababtoo ah way waxbadan ba inaga horeyaa iyo waxa aan raaba in hubsaado in kubada cagta sii buuxda la hormaariye sanadada soo socda.
Sanadadii ina dhaafay, waxa kulamada rasmiga ah ee kamidka horyaalka cassimada dalka ku ciyaarayne, lakinse hadda waxbo badan ba isbadelay iyo waa cusub dhinaca horumaarka ay soo baxeen. Waxa aan fursadan in aan u mahad naaqo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaacil Cumar Geele oo wax walba awoodisa ah inu qabtay sidii uu inaga caawiyo waciyigelinta ciyaaraha kubada cagta guud ahaan dalka.” SIdana waxa yidhi gudomiyaha xidhidhka kubada cagta dalka Jabuuti Salebaan Xasan Waberi oo warbaahinta la hadlaye.
Crouch oo ku guulaystay abaal-marin loo bixiyey ‘Crouch-on d’Or’